Govt postpones due-payments for its leased-hotels | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalGovt postpones due-payments for its leased-hotels
Govt postpones due-payments for its leased-hotels
နိုင်ငံပိုင်ဟိုတယ်ငှားရမ်းခ ပေးသွင်းခြင်းကို ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့သို့ ရွေ့ဆိုင်း
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံပိုင် ဟိုတယ်များကို ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ငှားရမ်းထားလျက်ရှိပြီး ယင်းဟိုတယ်များအတွက် ဧပြီလ ၁ရက်နေ့တွင် ဟိုတယ်ငှားရမ်းခ၊ မြေငှားရမ်းခ ပေးသွင်းခြင်း စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့မှသာ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် ရောဂါကူးစပ်မှု ကျယ်ပြန်လာသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ်များတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွား၀င်ရောက်တည်းခိုးခြင်းမရှိဘဲ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရပ်ဆိုင်းထားရသည့်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုအပေါ် ကုစားနိုင်ရန် ငှားရမ်းခပေးသွင်းခြင်းကို ၆လ ရွေ့ဆိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် ထိခိုက်မှုရှိနေသဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ လုပ်ငန်းရှင်များအား ခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှ လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေးများ ပေးဆောင်ခြင်းကို ၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ရက်နေ့အထိ တစ်နှစ်တာ ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
The Ministry of Hotels and Tourism has postponed payments for the hotels it has leased to private operators until September 30.
The COVID-19 pandemic has put the toll on hotels as the tourism industry is halted by the pandemic and there is no guests staying at the hotel.
Therefore, the government has decided to postpone the due payment to next six months in order to remedy the situation in tourism industry.
Moreover, it also has exempted license fees or license extension fees for one year until March 31, 2021 for tourism businesses.
Previous articleHuawei P40 Pro debuts in Myanmar
Next articleFactories to be inspected for workplace arrangement